မြန်မာပြည်တွင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 303
သူ့မှာတမ်း ကာတွန်း – အောင်မော် မေ ၁၈၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်း အောင်မော်၏ ဖေ့ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကျမ၏ တတိယမြောက်ဒစ်ဂျစ်တယ် စာအုပ် ဂျူနီယာဝင်း၊ မေ ၁၈၊ ၂၀၁၃ စာဖတ်သူများသို့ … ကျွန်မ၏ တတိယမြောက် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ သည်တခါတော့ ဗမာလိုဆောင်းပါးများသာ ပါဝင်ပါသည်။ အတွေးအမြင်နှင့် မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါး ၉၆ပုဒ် စုစည်းမှု ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ၏ဆောင်းပါး အက်ဆေးများ မဖတ်လိုက်ရ မရှိရလေအောင် ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ စာမူများကို အပ်ခြင်းနှင့် ပရု့ဖ်ဖတ်ခြင်းများကို ကျွန်မကိုယ်တိုင် အကုန်အကျခံ လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းကိစ္စများကို (မိုးမခမီဒီယာ) က တာဝန်ယူထားပါသည်။ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးကို တကယ်ပဲ ကူးပြောင်းခဲ့ပြီဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်မစာဖတ်သူများအားလုံး တစ်ယောက်မကျန် သည် ဟောဒီ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်လေး၊ အားလုံးလက်ဝယ်ရောက်ခဲ့ပြီဟု ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခေါင်းစဉ်ကို ၉၆+ဟု ပေးထားသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ အတွေးအမြင်ဆောင်းပါး အရည်အတွက် ၇၆ ပုဒ်...
ကော်နာထဲမှာ ဘဘတွန့်ကို ထားရစ်ခဲ့ ဂျော်ဒီး မေ ၁၇၊ ၂၀၁၃ နွေကျောင်းပိတ်ရက်ကြီး ကုန်ဆုံးတော့မည်..။မကြာမီကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်မည်မို့ မိဘတွေ စိတ်ညစ်နေသလောက်.. မိုးမခရွာသား ကလေးငယ်များ ကား အတန်းသစ်တွင် ပညာသင်ကြရမည့် အရေးတွေးပျော်နေကြသည်..။ထုံးစံ အတိုင်း သူတို့ စုရပ် ရွာထိပ်ညောင် ပင်ကြီးအောက်တွင် ဆော့ကစားရင်း… “ဟေ့..ခုနှစ် ကျောင်းဖွင့် ရင် ကျောင်းအပ်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတိုင်းကို ဗလာစာအုပ်က တဒါဇင်.။ပုံနှိပ်တစ်စုံ..။ပြီးတော့ ပိုက်ဆံ တစ်ထောင် တောင် ပေးဦးမယ်တဲ့ ကွ” သာဂိက၀မ်းသာအားရ သတင်းပေးလာသည်..။ အရာရာ ရစ်ရ မှ ကျေနပ်သော မောင်ရစ်က မှုန်တေတေနှင့် ပြောသည်..။ “မနှစ်တုံးကလည်း ပုံနှိပ် စာအုပ်တွေ ပေးတယ် ဆိုပြီးငါတို့ တွေ ဘယ်မှာရလို့လဲ...
ဥပဒေက ပေါပါဘိသနဲ့ ကာတွန်း – အောင်မော် မေ ၁၆၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်းအောင်မော်၏ ဖေ့ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
လူ့ငယ်ဂုဏ်ရည် မြင့်တက်စေဖို့ – အပိုင်း (၅) သန်းဝင်းလှိုင် မေ ၁၆၊ ၂၀၁၃ ● အတတ်ပညာ လူငယ်တို့ရေ ယခုခေတ်ဟာ သိစရာ တတ်စရာတွေ များလှတယ်။ ဝိဇ္ဇာပညာလည်း ဝိဇ္ဇာပညာအလျောက်၊ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ လည်း သိပ္ပံပညာအလျောက် ထွေပြားတယ်။ လူတို့ရဲ့ သက်တမ်းနဲ့ နှိုင်းစာရင် သင်ယူဆည်းပူးစရာ တတ်သိပညာတွေ လွန်စွာ များလွန်းလှတယ် ခေါ်ရမှာပဲ။ အလုံးစုံသော ပညာရပ်ကို မဆိုထားဘိ တစ်ခုသောပညာရပ်ကိုပင် တစ်ဖက် ကမ်းခပ် သင်ကြားတတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အခုခေတ်ဟာ ဘွဲ့လေးတစ်ခုရရုံ၊ ဒီဂရီကလေး တစ်ခုရရုံနဲ့ အလုပ်ရနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပေမဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုခု ကို တစ်ဖက်လူနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရန် ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် တတ်မြောက်အောင်...
ကောက်လိုက်ကြစို့…အတူတူ ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ နည်းပညာများ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ထိုတိုး တက်လာသော နည်းပညာ၏နောက်မှ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ တပါတည်း ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများထဲတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝဂေဟစနစ်များ ပျက်စီးစေနိုင်သော “အမှိုက်” ဟုခေါ်သည့် လူတို့အသုံးပြုပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတို့တွင် နေ့စဉ်အမှိုက်တန်ချိန် မြောက်များစွာထွက်ရှိနေပြီး ထိုအမှိုက်များ ထဲတွင် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းမှစ၍ ဓါတုစွန့်ပစ်အမှိုက်အထိပါဝင်သည်။ မီးဖိုချောင်သုံး စွန့်ပစ်အမှိုက်များ သည် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ပျက်စီးဆွေးမြေ့လွယ်သော်လည်း အခြားသော လျှပ်စစ်စွန့်ပစ် ပစ္စည်း များဖြစ်သော မတော်တဆထိခိုက်၍ အသက်အန္တရာယ်ထိပါးစေနိုင်သော ဓါတ်ခဲအဟောင်းများ၊ မီးချောင်း၊ မီးချောင်းချုပ်၊ မီးလုံး၊ Electronic Circuit များအပြင်...
လူငယ့်ဂုဏ်ရည်မြင့်တက်စေဖို့ – အပိုင်း (၄) သန်းဝင်းလှိုင် မေ ၁၄၊ ၂၀၁၃ ● စာဖတ်ခြင်း လူငယ်တို့ရေ…. ကိုယ်ဘာအလုပ်ကိုပဲ လုပ်နေလုပ်နေ စာများများဖတ်ဖို့တော့ လိုတယ်။ စာအုပ်တွေဟာ မင်းရဲ့ အမြင် မင်းရဲ့ အတွေးနဲ့ မင်းစိတ်ကူးအိပ်မက်နယ်ပယ်တွေကို ချဲ့ထွင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ စာကိုဖတ်တတ်ဖို့ ဖတ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ တတ်ဖို့၊ သိဖို့၊ အလိမ္မာဥာဏ်ရင့်သန်ဖို့အတွက် ဖတ်ကြတာ။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်တွေ့နဲ့ ဘယ်အလုပ်၊ ဘယ်အကြောင်းအရာကိုမှ ကုန်စင်အောင် မသိနိုင်ဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ လူပေါင်းများစွာတို့ရဲ့ အသိအမြင်၊ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံတွေစုထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်မှတ်မှသာလုံလောက်တဲ့အသိဥာဏ်ဗဟုသုတကို အချိန်တိုအတွင်းရနိုင်ပါတယ်။ လူဟာ သေသွားတဲ့အထိ အလုံးစုံသော ဗဟုသုတ၊ အလိမ္မာကို မိမိတကိုယ်တည်းလေ့လာဆည်းပူးဖို့ လုံလောက်တဲ့အချိန် မရနိုင်ဘူး။ မိမိထက်အရင် အတွေ့အကြုံများတဲ့...
“စိတ်ညစ်လျှင် ရေချိုးပါ” ဆိုသော်လည်း ဇူးဇူး (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မေ ၁၄၊ ၂၀၁၃ ဆရာတော်ရဝေနွယ်(အင်းမ) ရေးသားထားသော “စိတ်ညစ်လျှင်ရေချိုးပါ” ဆိုသော ခေါင်းစဉ်လေး အတိုင်း မကျင့်သုံးနိုင်ကြသူများအား စိတ်ညစ်ချိန်တွင် ရေဝဝလင်လင် ချိုးနိုင်ခွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁ဝ.၅.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ (၄းဝဝ) နာရီအချိန်ခန့်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဒု-ဥက္ကဌ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်ထံသို့ လူဦးရေ (၁၈ဝ) ခန့်နေထိုင်သော မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ သောက်သုံးရေပြတ်လပ် ကြောင်း ဆက်သွယ်၍ အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ကျန်းမာရေးမှတ်တိုင် အနီးရှိ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂေဟာ၌ သောက်သုံးရေ အမှန်တကယ်ပြတ်လပ်မှု ရှိ/မရှိအား နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)မှ ဒု-ဥက္ကဌ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသဖြင့် လှူဒါန်းမှုအား ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏...
Page 303 of 349«1...301302303304305...349»